Google Assistant for Wear OS dia nohavaozina miaraka amina asa telo | Androidsis
Ny famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS dia hahazo fanavaozana afaka andro vitsivitsy manan-danja amin'ny lahasa vaovao maromaro. Na dia asa vaovao aza ireo natokana ho an'i Google Assistant. Mba hahafahan'ny mpampiasa manao bebe kokoa amin'ny mpanampy amin'ny famantaranandrony. Ka ireo fanovana ireo dia azo antoka fa eken'ny mpanjifa tsara.
Hatramin'ny nahatongavan'ny Mpanampy Google hiambina miaraka amin'ny Wear OS (Android Wear taloha) dia tsy ny tsara indrindra. Io dia kinova somary decaffeined, tsy misy endri-javatra maro. Nefa hita fa ny tetikasan'ilay orinasa dia ny handefa ny asany rehefa mandeha ny fotoana. Ka izao dia ho avy ity fanavaozana ity.
Ka efa manana fanavaozana lehibe voalohany momba an'io isika. Ka ny Google Assistant amin'ny famantaranandro marani-tsaina dia mahazo asa vaovao telo izay hanomezana fahafaha-manao bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa. Misy lahasa telo izay hahatonga azy io ho feno kokoa. Amin'izay dia hanan-karena be ny fampiasana isan'andro. Inona avy ireo endrika vaovao ampidirina?
1 Henoy ny valiny
2 Soso-kevitra marani-tsaina
3 Fampiharana mifangaro
Henoy ny valiny
Hatramin'izao, rehefa nametraka fanontaniana tamin'ny famantaranandro izahay. ny valiny dia naseho teo amin'ny efijery mitovy amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra. Na dia mahasoa aza izany dia tsy nanome ny traikefa tsara indrindra na nahazo tombony betsaka tamin'ny fampiharana toa an'io. Soa ihany, i Google dia hanova an'ity miaraka amin'ity fampiasa vaovao ity.
Nanomboka izao, Hamaky mafy ny valin'ny fanontaniantsika ihany koa ny Google Assistant. Ka hanana traikefa mitovy amin'ny ananantsika amin'ny fitaovana hafa isika. Na dia izany aza dia ilaina ny manana mpandahateny na vonona hiatrika azy io. Azonao atao koa ny mampiasa Bluetooth hankafizanao io asa io.
Ity fiasa ity izao dia tonga amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS, na dia efa ela aza ireo mpampiasa finday Android mampiasa ny mpanampy no nampiasa azy io. Ny hevitra dia ny hampiseho aminao ny tolo-kevitra maranitra, amin'ny fomban'ny valinteny hendry, ilay mpamosavy. Amin'izany dia ho afaka hanao fangatahana haingana kokoa ianao amin'ny famataranandro. Tsy mila miresaka amin'ny famantaranandro intsony ilay mpampiasa. Ka lasa haingana sy mahazo aina kokoa ny fizotrany rehetra. Tena ilaina amin'ny efijery kely toa ny famantarananao.
Ny farany indrindra amin'ireo fiasa vaovao tonga amin'ny Google Assistant ireo dia mety ho iray izay afaka manome ny lalao lalao be indrindra amin'ny mpampiasa amin'ny smartwatch. Hatramin'ny fampiharana natsangana, izay efa nisy tamin'ny telefaona, mahatratra famantaranandro ihany koa. Amin'izany no hahafahan'ny mpampiasa miresaka amin'ny mpanampy hafa noforonin'ny antoko fahatelo tamina fiononana feno.
Ho fanampin'izay, raha manana fitaovana an-trano marani-tsaina mifanaraka amin'ny mpanampy Google isika dia afaka mampiasa an'io asa io. Azontsika atao koa ny mifehy ny fitaovana ao an-trano ary manao fanaraha-maso sasany (vonoy ny jiro na angataho hametraka ny radio ohatra), amin'ny alàlan'ny Wear OS antsika. Ka mifehy ny fitaovana maro hafa izahay.
Ireo endri-javatra ireo dia maneho ny fanavaozana lehibe voalohany tonga amin'ny Google Assistant amin'ny famantaranandro Wear OS.. Noho izany, ny mpampiasa dia azo antoka fa mankasitraka ireo fiasa vaovao ireo, satria hahafahan'izy ireo manatanteraka asa bebe kokoa ary mahazo bebe kokoa amin'ny mpanampy. Ho fanampin'izay, manohy mahita izahay ny fomba hanohizan'ny mpanampy ny fisian'ireo fitaovana mampiasa ny rafi-piasan'i Google.
Ireo endri-javatra ireo dia antenaina ho tonga amin'ny famantaranandro mihazakazaka Wear OS ho rafitra fandidiana tsy ho ela.. Saingy tsy te hanome daty manokana momba an'io i Google. Azo antoka fa hahazo fampandrenesana milaza ny fisiany ianao na mety hivoatra ho azy ny fampiharana. Na dia, io no fomba fanavaozana anao, dia tsy ho ela ianao dia hankafy ireo fiasa ireo amin'ny smartwatch anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Assistant for Wear OS dia nohavaozina miaraka amin'ny fiasa vaovao
Ny sasany amin'ireo famaritana ny OnePlus 6 dia voamarina
Wiko Jerry 3: smartphone Android GO vaovao miaraka amin'ny efijery 18: 9